Zhejiang Yuking Technology Co., Ltd. ari nyanzvi mugadziri uye ekisipota izvo nehanya design, kukura uye kugadzirwa Auto Air Conditioning Compressor, uye vamwe chokuita Auto A / C Parts. Zvose zvinhu zvedu zvinoenderana dzakawanda unhu mitemo uye vanoongwa kwazvo akasiyana-siyana misika pose.
Our vakanyatsoshongedzwa zvivako uye yokuisvonaka masimba munyika mumatanho zvose okuwana tikwanise hunovimbisa zvachose vatengi kugutsikana. We achakupaiwo yakatsiga uye dzakasiyana-siyana Auto A / C Compressor uye Auto A / C nhengo nomwoyo wedu wose. Somugumisiro yepamusoro zvinhu uye hunoshamisa vatengi, chigadzirwa yedu kare Export kuna North America, South America, South-East Asia, Middle-East uye dzimwe chokuita nyika.
Tiri pakuti "Excellent Quality, Zvainyanya Trust, uye Perfect Service". Mwoyo mutengi wacho mwoyo, vakafunga mutengi wacho kufunga, kubatsira mutengi wacho. Tichandovigirei zvoupfumi munyika vatengi. Pachokwadi achitarira mberi kuva refu pamwe uye kukura nemakasitoma zvose. Welcome chero shamwari nesu!